Etu esi ere na Amazon: Usoro Nduzi
Izu a, anyị nwere ọmarịcha mkparịta ụka ya na Randy Stocklin na anyị Podcast. Randy bụ ọkachamara ecommerce bụ onye kwadoro ntọala otu Pịa Ventures, ụlọ ọrụ nwere nnukwu eretailers atọ na ụlọ ọrụ eyeglass. Otu isiokwu anyị metụrụ bụ mkpa ọ dị ire na Amazon.
Na ya ịrịba apụghị iru, Amazon kwesịrị mgbe a ga-asuan ka a n'aka nke na-ere na-ekesa nke ọ bụla nke gị na ngwaahịa. Uzo ojoo ghara nwere mmekọrịta gị na onye ahịa gị karịrị ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ahịa ndị ahịa Amazon. N’ezie, ihe karịrị otu narị nde mmadụ na iri ise ka ha bịara Amazon kwa ọnwa.
Isi ihe bụ iji ntuziaka dịka nke a iji mụta ihe dị ka o kwere mee, merie asọmpi gị, ma zere imefusị ego na mmejọ nzuzu. Ahịa ahụ na-asọ mpi n'ezie, ka ị matakwara, ọ ga-akacha enyere gị aka iji merie asọmpi ahụ. Ron Dod, Nlele
Nlegharị bụ eCommerce Search Marketing Agency ma ha etinyela ọnụ Ntuziaka kachasị maka nchịkwa Amazon, isiokwu dị omimi miri emi banyere ihe niile ị chọrọ ikpebi etu ị ga-esi ree na Amazon, mkpebi ndị bụ isi ịkwesịrị ịme, yana otu esi amalite.
Atụmatụ Ahịa Amazon - kpebie ma ịchọrọ ịbụ onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye ọkachamara ọkachamara.
Amazongwọ Ndị Ahịa Amazon - mmezu, mbupu, mmechi, na Ntuziaka ụgwọ niile nwere ike etinyere mgbe ere na Amazon.
Mmezu - Mmezu nke Amazon (FBA) ma ọ bụ Mmezu Ntanetị chantzụ ahịa (MFN) bụ nhọrọ maka ịnweta ngwaahịa gị site na ụlọ nkwakọba ihe ruo n'ọnụ ụzọ.
Họrọ Ngwaahịa gị - Nwere ike ịchọghị ngwa ahịa gị niile na Amazon, yabụ enyere nkọwa ụfọdụ banyere otu esi ahọrọ nke ọma ngwaahịa ndị ịchọrọ n'ebe ahụ.
Mbido gị Ngwaahịa - Ọ bụ otu ihe iji bipụta ngwaahịa, ihe ọzọ iji mee ka ọ gosipụta na ọchụchọ ma nweta nnukwu ahịa. A na-enye ndụmọdụ na infographic a.
A kpaliri ịmalite?
Bido ire na Amazon
Tags: amazonecommerce amazonụgwọ Amazonamazon mezuruamazon Ntuziaka ụgwọamazon na-ere ụgwọamazon na-ere atụmatụugwo ahia ugwoamazon agbanwe ụgwọfbammezu by amazonesi ere na amazonAhịa mezuru Networkmfn